Waa kuma madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud? | Shabakada Alshahid
Waa kuma madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud?
Added by Webmaster on September 11, 2012.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xassan Sheikh Maxamuud
Mogadishu (Alshahid)- Prof.Xassan Sheikh Maxamuud wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee lagu doorto gudaha dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dalka ka dhacay Labaatan Sano ka hor.
Waxaa uu hogaamin doonaa dowlad aan Kumeel-Gaar ahayn oo si buuxda dalka uga hana-qaadaysa Afarta Sano ee soo socota. Taas oo badali doonta Dowladihii soo jiray mudooyinkii lasoo dhaafay oo iyagu ahaa kuwo Kumeel-Gaar ah awoodooduna ay tahay mid kooban.
Si wayn ayaa loogasoo dhaweeyay gudaha iyo dibada dalkaba madaxweynaha cusub ee Jahmuuriyada Federaaliga ah ee Soomaaliya mudane Xassan Sheikh Maxamuud. Waxaana maanta ay hadal-heynta bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba tahay doorashadii Xalay la qabtay iyo hogaamiyaha cusub ee dalka.
Xasan Sheikh Maxamuud wuxuu dhashay sida ku cad Warqadihiisa aqoonsiga Shakhsiyadeed Sanadkii 1958-dii, wuxuuna ku dhashay degmada Jalalaqsi ee gobalka Hiiraan.
Waxbarashadiisii Aas-aasiga ahayd wuxuu kusoo qaatay gudaha Soomaaliya, wuxuuna ka baxay Jaamacadii Umada ee dalka ku tiilay Sanadkii 1981-kii.
Dabayaaqadii Sideetamaadkii ayuu Jaamacad lagu magacaabo Boobaal oo ku taala Dalka India kasoo qaatay Shahaadada Master-ka ee ah Darajada 2-aad ee Waxbarashada Jaamacadeed.
Waa Injineer Cilmiga Farsamada kusoo qaatay inta badan Shahaadooyinkiisa Jaamacadda. Markii uu waxbarashada Jaamacadda kusoo gaaray Heerka Master-kana wuxuu billaabay inuu ka shaqeeyo hay’ado badan oo qaarkood ay kuwo dowladeed ahaayeen illaa ay ka burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya Sanadkii 1991-kii.
Wax-qabadkiisii uu Caanka ku noqday waxaa ka mid ahaa isagoo Macalin iyo tabababareba ka ahaa Wasaaradii Waxbarashada ee dalka ka hor burburkii. Markaa ka dibna wuxuu kasoo shaqeeyay Hay’ado Caalami ah oo ay ku jirtay UNICEF.
Wuxuu ahaa mas’uulka ugu sareeya UNICEF ee Soomaaliya illaa lagasoo gaaro 1995-tii oo ah markii ay hay’adihii Qaramada Midoobay ee Soomaaliya joogay lana shaqaynayay howlgalkii UNISOM ay dalka isaga bexeen.
Wax-qabadyadisii kale waxaa ku jirtay isagoo ka mid noqday Aqoonyahanno aas-aasay Machad laga barto Cilmiga Maamulka iyo Maareynta, kaas oo lagu magacaabi jiray SIMAD iminkana isku rogay Jaamacad ka mid ah kuwo sida wayn looga yaqaan haatan Muqdisho.
Hay’adda Cilmi Baarista iyo Wada-tashiga ka shaqaysa ee la yiraa CRD ayuu Prof. Xassan Sheikh Maxamuud lasoo shaqeeyay mudo ka bilaabanaysay Sanadkii 2002-da, wuxuuna hay’adaas kasoo noqday ku xigeenka madaxa ugu sareya.
Xizbi Siyaasadeed lagu magacaabo Nabadda iyo horumarinta (Peace and Development Party) ayuu Sanadkii lasoo dhaafay kaga dhawaaqay Prof. Xassan gudaha Muqdisho isagoo waqti yar ka dib dhismaha Xizbigaasina ku dhawaaqay inuu yahay murashax madaxweyne oo Xizbiga ku matali doona doorashada dalka ka dhacaysa.
Xalay ayuu si rasmi ah ugu guuleystay inuu noqdo madaxweynihii 8-daad ee Jahmuuriyada Soomaaliya illaa markii uu dalku xornimada qaatay noqdayna dal madax-banaan.
Prof. Xassan Sheikh wuxuu ku hadlaa sida ku cad Waraaqihiisa aqoonsiga Luqadda English-ka marka laga tago Luuqada Afka Hooyo ee Soomaaliga.